दिवालियापन: चरणहरू, सुविधाहरू, सर्तहरू
रूसी कानून त्यहाँ दिवालियापन रूपमा कानुनी वर्गमा छ। नियामक प्रेरित मा सान्दर्भिक प्रावधान शारीरिक र कानुनी दुवै संस्थाहरू समावेश हुन सक्छ। कानुनी निकायहरूको दुवै प्रकारको दिवालियापन प्रक्रियाहरु को विशेष के हुन्?
दिवालियापन के हो
"दिवालियापन" को अवधारणा दुई तरिकामा व्याख्या गर्न सकिन्छ।
पहिले, यो अवधि जसमा उद्देश्य मापदण्ड आधारित ऋणी, लेनदारों संग बसोबास गर्न कुनै मौका छ एक राज्य बुझे गर्न सकिन्छ। ऋण विषयको अक्सर छ - बैंक ऋण। तर तिनीहरूले पनि द्वारा प्रदान गरिएको ऋण, उदाहरणका लागि, एक बैंकिङ लाइसेन्स वा छैन भनेर एक Microfinance संगठन हुन सक्छ एक निजी व्यक्ति। रिकभरी विषयको पनि राज्य कोषको (जस्तै, कर, छुटानाम भएपछि पतिले पत्नीलाई दिने पैसा र अन्य शुल्क) मा अनिवार्य भुक्तानी देखि arising को नागरिक वा संगठनको दायित्व हुन सक्छ।
दोस्रो, टाट को धारणा उधारकर्ता गरेको दिवालियापन कानुनी रूपमा साबित जसमा प्रक्रिया हो, सम्बन्धित हुन सक्छ। यो वास्तवमा यो ऋणी गरेको वित्तीय अवस्था अझ सजिलो बित्दै कि बहिष्कृत छैन। यो कारणले हुन सक्छ, उदाहरणका लागि ऋणदाता सहमत हुनेछन् भन्ने तथ्यलाई ऋण को भाग बन्द लेख्न। उधारकर्ता दाबी को अभाव प्रदान वा यो पनि गरे हुन सक्छ दिवालियापन को चरण मा भुक्तानी बन्दोबस्त सम्झौताको अवस्था mitigate।
रूसी legislator प्रक्रिया फाइदा लिन थप हालै र नागरिक यसलाई कानुनी व्यक्ति गर्न सम्भव बनाउँछ, र। को दिवाला प्रक्रिया सुरुवात कठिनाई अनुभव उधारकर्ताओं, एक ऋण तरिका मा लेख्ने-बन्द कानून मा निर्धारित भने, पुनर्गठन मा गणना गर्न सक्नुहुन्छ। यस मामला मा, दिवालिया प्राकृतिक व्यक्ति वा संगठनको स्थिति छैन क्षणमा हुँदा शो सान्दर्भिक पहल, र ऋणदाता संग प्रक्रिया संचार को अन्तिम चरण मा। दिवालियापन को पहिलो चरणको उधारकर्ता दिवालिया घोषणा गर्न आवश्यक छ भन्ने छैन।
कानून अन्तर्गत एक दिवालिया स्थिति
तर रूसी कानुन अन्तर्गत "दिवालिया" स्थिति को संकेत के हो? त्यो एक व्यक्ति वा संस्थाको बिल्कुल पनि पुनर्गठन र अन्य सम्भव लाभ को अवस्था अन्तर्गत creditor अनुरोध पूरा गर्न कुनै क्षमता छ भनेर झल्काउने अदालत तथ्य मा सिद्ध मान्छ। यस मामला मा, बित्तिकै दिवालियापन को सबै चरण पूरा रूपमा, व्यक्ति वा कम्पनी संवाददाता स्थिति प्राप्त, र ऋण कारण उधारकर्ता को सम्पत्ति को बिक्री फर्के छन्।
यसरी, मूल दृश्य को कानुनी बिन्दुबाट untenable छलफल भएको थियो जो प्रश्न प्रक्रिया, सुरु कि एक व्यक्ति वा संस्थाको। तर दिवालियापन प्रक्रियाको कुनै पनि मंच मा भने यसलाई तिनीहरू वास्तवमा ऋणदाता अवस्था, प्रासंगिक स्थिति प्राप्त अन्ततः व्यक्ति स्वीकार्य सर्तहरू मा ऋण सेवा गर्न सक्ने गर्दछ। तिनीहरूले कानुनी रूपमा दिवालिया घोषणा हुन।
विचार कसरी दिवालियापन (दिवालियापन) को चरण मामला मा यदि उधारकर्ता - एक प्राकृतिक व्यक्ति। यसलाई उल्लेख हुन सक्छ कि आफ्नो वित्तीय दिवालियापन को पहिचान को पक्ष मा नागरिकहरु को सहभागिता साथ ऋण व्यवस्थापन सम्बन्ध को क्षेत्र मा रूसी कानून - एकदम नयाँ। पहिले नियमहरू पूर्णतया संगठनहरूको मात्र दिवालियापन नियमन।
व्यक्तिहरूलाई लागि दिवालियापन प्रक्रिया को सुविधाहरू
प्रश्न प्रक्रिया को सूत्रपात अदालत मा ऋणी वा creditor को उपचार सुरु। केही अवस्थामा, प्रक्रिया पनि जोडिएको र सरकारी एजेन्सीहरू गर्न सकिन्छ। संवाददाता कथन नागरिक निवास लागि लागू गर्नै पर्छ। यो बिन्दुमा, आफ्नो कुल ऋण हजार 500। Rubles र बढी हुनुपर्छ।3महिनाको लागि बाँकी भुक्तानी - अर्को मापदण्ड असफलता प्रक्रियाहरु को सूत्रपात लागि आवश्यक छ।
एक नागरिक एउटा अनुप्रयोग प्राप्त गरेपछि, अदालत यसको वैधता। पुनरावेदनका व्यवस्था अनुपालन र व्यक्ति भुक्तानी गर्न सीमित क्षमता छ भने, त्यसपछि यो प्रक्रिया बुझे ऋण पुनर्गठन, को उधारकर्ता को वित्तीय बोझ को सरलता बनाउन implies जो। मुद्दाहरू प्रश्न प्रक्रिया सबै प्रमुख चरणमा सान्दर्भिक सामना गर्ने वित्तीय प्रबन्धक नियुक्त। उहाँले आफ्नो काम निःशुल्क गर्दैन: यो 10 हजार rubles, साथै creditor गर्न ऋणी देखि अन्ततः ठीक हुनेछ जो धन, 2% को स्थानान्तरण उधारकर्ता एउटा निश्चित रकम भुक्तानी गर्न मानिन्छ छ लागि ... वित्तीय अधिकारी दिवालियापन को अर्को चरण, लेनदारों को विशेष बैठक शुरू। यसको सदस्य ऋणी विरुद्ध रजिस्टर दावी गठन गर्ने छ।
प्राकृतिक व्यक्ति को दिवालियापन: प्रतिबन्ध
को दिवाला प्रक्रिया र अनुसार व्यवस्था संग अदालत द्वारा संवाददाता आवेदन रसिद को सूत्रपात पछि नागरिक, कानुनी सम्बन्ध केहि प्रकारको एउटा पक्ष हुन सक्दैन। पनि विरुद्ध यो निश्चित नागरिक गतिविधिमा प्रतिबन्ध एक नम्बर स्थापित गरिएको छ। उदाहरणका लागि, ऋणी सम्पत्ति एक कम्पनी को शेयर राजधानी को संरचना मा, साझेदारी वा कम्पनीहरु मा stakes को एक क्रेता रूपमा कार्य गर्न हस्तान्तरण गर्न सक्छ। उधारकर्ता पनि अनुदान को प्रकृति हो लेनदेन मुछिएको कानुनी सम्बन्ध प्रवेश गर्न निषेध गरिएको छ। एक व्यक्ति खरिद गर्न सक्नुहुन्छ वा यसलाई 50 भन्दा बढी हजार rubles लायक छ भने, जमानत, कार वा अन्य सम्पत्ति बेच्न, र जमानत रूपमा सम्पत्ति हस्तान्तरण - .. वित्तीय व्यवस्थापकले सान्दर्भिक गतिविधि अनुमोदन गर्दैन भने। यसलाई ग्यारेन्टी को प्रावधान सहभागी एक ऋणदाता स्थिति रूपमा कार्य गर्न कुनै अधिकार छ।
पुनर्गठन को सार
हामी को मामला मा दिवालियापन को प्रमुख चरण विचार भने वित्तीय रिकभरी , ऋणी को पुनर्गठन ती पहिचान गर्न सकिन्छ सहित। यसलाई निम्न सुविधाहरू द्वारा विशेषता छ:
- कुनै पनि चासो, दण्ड मात्रा, साथै जरिवाना वा सजाय ceases को चार्ज;
- प्रवर्तन कार्यवाही (कुनै छ भने) आवश्यकताहरु को एक भाग क्षति वा अवैध सम्पत्तिको देखि सम्पत्ति को फिर्ती लागि छुटानाम भएपछि पतिले पत्नीलाई दिने पैसा, क्षतिपूर्ति समावेश गरिएको छैन भने निलम्बित गरिनेछ;
- वित्तीय लेनदारों 'दावी अदालत प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ।
पुनर्गठन प्रक्रिया सक्रिय भएपछि, वित्तीय व्यवस्थापक र लेनदारों गर्ने अधिकार छ भन्ने तथ्यलाई3वर्ष को लागि उनलाई द्वारा शुरू उधारकर्ता को नागरिक-व्यवस्था लेनदेन को चुनौती छ।
को पुनर्गठन को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण घटक - एक उपयुक्त योजना। यो ऋणी नियमित आय छ भने गर्न सकिन्छ यो पहिले दिवालिया को निर्धारित तरिका पहिचान गरिएको छ र आर्थिक अपराधको लागि दोषी गरिएको छैन। प्रश्न मा योजना, को परिमाण, समय र परिशोधन एल्गोरिदम विषयमा जानकारी समावेश।
3 साल - पुनर्गठन योजना को कार्यान्वयन अधिकतम अवधि। संवाददाता कागजात सामान्यतया वित्तीय नियन्त्रण माथि कोरिएका छ, र यो लेनदारों द्वारा अनुमोदित हुनुपर्छ। योजना कानुनी सम्बन्ध ती सहभागीहरू संग सहमत पछि, यो अदालत अनुमोदन लागि पारित गर्न सकिन्छ।
प्रश्न कागजात, को स्थापित क्रममा स्वीकृत गरिएको छैन भने, यो मामला मा नागरिक दिवालिया घोषणा गर्नुपर्छ। तर यदि योजना दिवालिया उधारकर्ताओं को पहिचान को लागि प्रक्रिया को रूपरेखा मा कानूनी सम्बन्ध सबै विषयहरू द्वारा अनुमोदित छ, यो कानुनी परिणाम सँगसँगै छ:
- लेनदारों योजना स्वीकृत र ग्रहण र सान्दर्भिक कागजात को अनुमोदन साथ दिनु भनेर घाटा लागि क्षतिपूर्ति गर्न योग्य छैन जो ऋणी, गर्न आवश्यकताहरू परिवर्तन गर्न सक्दैन;
- अदालत असुरक्षित creditor अनुरोध सम्बन्धित केही उपाय लिएको छ भने तिनीहरू रद्द छन्;
- कुनै पनि पेनाल्टी रद्द रूपमा दायित्व पूरा गर्न विफलता लागि लगाएको, को पुनर्गठन योजना मा मान्यता छ;
- ऋण को राशि उधारकर्ता correlatively, (मा प्रति प्रतिवर्ष प्रतिशत) देंगे दल को समन्वय मा संवाददाता मूल्य सम्भावित कमी संग को दर संग बढ्छ।
को पुनर्गठन योजना कार्यान्वयन स्पष्ट शब्द छ। यो सकिनु अघि वित्तीय अधिकारी कसरी राम्रो कागजात मा उधारकर्ता को भुक्तानी अनुशासन कायम झल्काउँछ जो एक रिपोर्ट, तयार गर्नेछ एक महिना। एक व्यक्ति अनुसार योजना, लेनदारों, र प्रबन्धक संग मा ऋण चुक्ता गर्न असमर्थ छ भने, कागजात रद्द गर्न अदालत लागू गर्न सक्नुहुन्छ।
अदालत, होने एक नागरिक पुनर्गठन रूपमा, योजना अन्तर्गत आफ्नो दायित्व पूरा रूपमा गर्न दिवालियापन को यो चरण को पूरा सन्दर्भमा निर्णय वा कागजात रद्द र उधारकर्ता पूर्वनिर्धारित पहिचान जांच।
दिवालियापन को पहिचान
त्यसैले, यदि प्रश्न मा योजना ऋणी गरेको छैन, अदालत एक दिवालिया स्थिति मा नागरिक अनुमोदन गर्न धेरै सम्भावना छ। कि पछि, लेनदारों गर्न उधारकर्ता गरेको दायित्व यसको सम्पत्ति को बिक्री गरेर भेट हुनुपर्छ। यस मामला मा, त्यहाँ बरामद सकिँदैन सम्पत्ति को विभाग छन्।
अदालत दिवालियापन स्वीकार भने, सान्दर्भिक संचार मा सहभागी कानुनी निकायहरूको गतिविधिहरु को अर्को चरण6महिना भित्र कार्यान्वयन गरिनेछ। यो समयमा, एक नागरिक एक प्राप्त गर्न सक्छन् विदेश यात्रा मा प्रतिबन्ध। साथै, केही प्रतिबन्ध यसको गतिविधिहरु को आदर मा लगाएको हुन सक्छ। उदाहरणका लागि, क्रेडिट र वित्तीय संस्थाहरू मा खाता र जम्मा खोल्ने मा प्रतिबंध। एक वित्तीय प्रबन्धक उद्धार गर्न उपयुक्त अधिकार।
व्यक्तिहरूलाई लागि दिवालियापन को नतिजा
एक नागरिक दिवालियापन कार्यवाही को सबै चरणमा एक पास पछि आफ्नो अधिकार अभ्यास गर्न सक्छन् जो गर्न हदसम्म? त्यसैले, केही सम्बन्ध मा मानव प्रविष्टि को nuances एक नम्बर त्यहाँ प्रदान गरिएको छ। उदाहरणका लागि, प्रक्रिया को पूरा एक ऋण लिन चाहनुहुन्छ हुनेछ पछि एक व्यक्ति5वर्ष भित्र दिवालिया घोषणा भने, यो आफ्नो स्थिति बारेमा ऋणदाता सूचित गर्न हुनेछ। पनि वित्तीय दिवालियापन नागरिक को पहिचान पछि3वर्ष समयमा संगठनको व्यवस्थापन संरचना मा उच्च ओहदा धान्न सक्दैन।
एक यस्तो प्रक्रिया हो, यो दिवालियापन characterizes कि उल्लेखनीय nuances को - को बन्दोबस्त सम्झौता। यो दुई तरिकामा व्याख्या गर्न सकिन्छ।
पहिले, एक बन्दोबस्त सम्झौताको हालतमा द्वारा creditor र ऋणी ऋण रद्द गर्न सहमत हुन सक्छ। अदालत मा - दोश्रो, को सम्बन्धित कानुनी निकायहरूको दिवालियापन कार्यवाही को रद्द प्रारम्भ गर्ने अधिकार छ। यस मामला मा, उधारकर्ता को ऋणदाता स्वीकार्य सर्तहरू मा ऋण सेवा गर्न जारी छ।
कानुनी निकायहरूको दिवालियापन
हामी दिवालियापन (सम्भव सहभागीहरू प्रक्रियाहरु रूपमा चरण) यस्तै छ भनेर मुख्य पक्षहरू समीक्षा प्राकृतिक व्यक्ति लागू गरियो। हामी संगठनहरूको को वित्तीय दिवालियापन को पहिचान को विशिष्टता अध्ययन।
यो एक सम्पूर्ण रूपमा कानुनी निकायहरूको को दिवालियापन को मुख्य चरणमा नागरिकहरु को सहभागिता को लागि सान्दर्भिक प्रक्रियाहरु को विशेषता हो जो ती संग एकै समयमा पर्नु भनेर उल्लेख गर्न सकिन्छ। को ऋणदाता, उधारकर्ता, वित्तीय व्यवस्थापक (कानुनी निकायहरूको को मामला मा - - मध्यस्थता), र अदालत दुवै अवस्थामा, बाहिर गतिविधिहरु को थोक नै कानुनी संस्थाहरू छन्। अवलोकन को चरण, कम्पनी सम्पत्ति को सुरक्षा सुनिश्चित उद्देश्य - यो प्रक्रिया बीचमा आवश्यक कानुनी निकाय दिवालियापन विरुद्ध सुरु सँगैको। तर दिवालियापन को पहिचान को संगठन पक्षहरू अनुपम छन् कि अरूलाई छन्। तिनीहरूलाई अध्ययन गर्न उपयोगी हुनेछ।
कानुनी निकायहरूको दिवालियापन: ऋण को राशि
दिवालियापन को चरण मा संगठन (अर्थात्, ऋण सेवामा उद्देश्य सम्बन्धित वित्तीय अफ्ठ्यारो अनुभव ती) अदालत आफ्नो ऋण 300 हजार छ भने लागू हुन सक्छ। RUB। तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ सान्दर्भिक मापदण्ड व्यक्तिहरूलाई लागि भन्दा पनि कम छ।
1 लाख rubles - यो रणनीतिक उद्यम, साथै ती संगठन प्राकृतिक monopolies स्थिति छ भनेर आउँदा, तिनीहरूलाई लागि अदालत गर्न वित्तीय सीमा धेरै उच्च छ।
कानुनी निकाय, दिवाला कार्यवाही शुरू, नियन्त्रण चयन गर्न सक्दैन। शासन कानून हालै देखा याद गर्नुहोस्। यसको परिचय गर्न पूर्व, केही विशेषज्ञहरु द्वारा उल्लेख रूपमा, संगठन प्रदान गर्न सक्छन् एक जानकारी नियन्त्रण, छ, ती मान्छे वफादारी वृद्धि गर्न उनीहरूलाई देखाउन धेरै सम्भावना छन्। एकै समयमा उपयुक्त स्थिति को ऋणदाता बनाउन सक्छ एक व्यक्ति को नियुक्ति मा आफ्नो राय व्यक्त गर्न।
दिवालियापन र मध्यस्थता पुरस्कार
कानुनी निकायहरूको मुछिएको विवाद को विचार अक्सर arbitral अधिकरणों द्वारा बाहिर छ। आफ्नो स्थिति राज्य संस्थाहरु देखि एकदम अलग छ। कानुनी निकायहरूको को दिवाला विनियमन व्यवस्था, यदि मध्यस्थता निर्णय को परिणाम मा कार्यान्वयन को एक writ छ दिवालियापन को लागि एक आवेदन को पेश्की मात्र सम्भव छ, जो एक दर छ। यो नियम कि उपयुक्त प्रकार गर्न ऋण दिंदा विशेषज्ञ वित्तीय संस्थाहरू रूपमा निर्धारित तरिका दर्ता छैन भनेर लेनदारों लागू हुन्छ। यो नियममा विधिशास्त्र मा पहिले देखा, तर हाल संघीय स्तरमा कानून मा निश्चित छ उल्लेख गर्न सकिन्छ।
दिवाला मा कानूनी व्यक्ति को दायित्व
संगठन प्रमुख स्थान पकड, कानून, व्यवहार को दृश्य को बिन्दुबाट सबै आवश्यक जानकारी व्यवस्थापक प्रदान लागि जिम्मेवार, साथै सबै लेनदारों को चासो को बराबर सन्तुष्टि लागि र सही को कानुनी निकायहरूको कर्मचारीहरु को दिवालियापन को कुनै पनि मंच मा। आदर मा कम्पनीहरु को अधिकारीहरु जो दिवालियापन प्रक्रिया को, उल्लंघन अनुमति भने, प्रशासनिक पेनाल्टी तिनीहरूलाई लगाएको हुन सक्छ। तिनीहरूले वरिपरि 100 हजार हुन सक्छ। RUB।
हामी प्रमुख सुविधाहरू र व्यक्तिहरूलाई लागि दिवालियापन को चरण र संगठनको लागि प्रक्रिया को विशिष्ट सुविधाहरू समीक्षा। यो रूसी कानून ऋण को परिशोधन संग सम्बन्धित समस्या समाधान गर्न ऋण पर्याप्त निष्पक्ष कानुनी हालतमा को क्षेत्र मा कानूनी सम्बन्ध को सहभागीहरू प्रदान गर्दछ उल्लेख गर्न सकिन्छ।
कसरी घोषणा गर्न दिवालियापन - यो एउटा सजिलो कार्य हो कि?
दिवालियापन मा संघीय कानून
प्राकृतिक व्यक्तिको दिवालियापन को नतिजा: प्रक्रिया को चरणमा, कागजात
लेनदारों को रजिस्टर देखिनका लागि creditor गरेको आवेदन। लेनदारों को प्राथमिकता
को स्त्रीरोग विशेषज्ञ गर्न जरुरी यात्रा। महिला रोग, र हरियो छुट्टी
खनिज ऊन को थर्मल चालकता को गुणक: गुण र विशेषताहरु
हलिउड कर्ल - वसन्त को रोमान्टिक प्रवृत्ति
रूसी उत्सव पकवान: आलु संग फ्रेंच मासु।
Meizu M2 मिनी: एक अवलोकन, विनिर्देशों र समीक्षा
Talkas लेक - को यूराल मा एक स्वर्ग
को चूहहरुमा के हुन्? खैरो मुसा। सजावटी मुसा